आइरहेको गर्मीमा कस्तो खानेकुरा खादा स्वास्थ्यको लागी हानीकारक हुन्छ ? जानीराखौ
गर्मीमा प्राय खानेकुरा एकछिन राख्य भने पानी बिग्रेने हुन्छ । हामीले गर्मि मौसममा खानामा बिषेश ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सडे घलेको खाना खानु हुदैन । गर्मीको बेला कसरी रोग निमत्याउछ भन्ने बारे तल उल्लेख गरीएको छ ।
१. चिया कफी
गर्मीमा पर्याप्त पेय पदार्थ पिउनुपर्छ । चाहे त्यो पानीको रुपमा होस् वा रसिलो फलफूलको रुपमा नै । झोलयुक्त खानेकुरा, फलफूल आदिको सेवनले शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित बनाइराख्छ । तर, हाम्रो दैनिक पेय चिया र कफी भने गर्मीमा उपयुक्त हुन्न ।
२. प्रोसेस्ड फूड
गर्मीको मौसममा तयारी वा प्रशोधित खानेकुराले पनि स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्‍याउँछ । यस्ता खानेकुरामा नुन, चिनी तथा बोसोको मात्रा बढी हुन्छ ।
प्रासेस्ड फूड सेवन गरेपछि धेरै पसीना आउँछ, जसले शरीरमा पानीमा मात्रा कम हुन जान्छ । यस्तो खानेकुराले पाचनयन्त्रलाई पनि हानी गर्छ ।
३. कोल्ड ड्रिंक
चर्को गर्मीमा हामीलाई चिसो कोकाकोला, फ्यान्टा, पेप्सी घुट्क्याउन मन लाग्छ । यसले हाम्रो रहर पूरा भए पनि तिर्खा भने मेटिँदैन ।
यस्तो पेय गर्मीमा बढी खपत हुने भए पनि त्यसले शरीरलाई फाइदा गर्दैन । बरु कोल्ड ड्रिंकको बदलामा सर्वत पानी, कागती पानी, मोही सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४. स्ट्रिट फूड
चर्को गर्मीमा कतै हिँडिरहेका बेला तपाईलाई चटपटे वा पानीपुरीले लोभ्याउन सक्छ । यस्ता खानेकुराले जिब्रोलाई क्षणिक स्वाद पनि दिन्छ ।
तर, पेटमा पुगेपछि भने गडबड हुन्छ । गर्मी याममा फूटपाथमा राखिएका चटपटे, पानीपुरी, आलुचप जस्ता कुनै पनि खानेकुरा ताजा र सफा हुँदैन, जसले पाचन यन्त्रलाई हानी गर्छ ।
५. जंग फूड
छिटो, छरितो र मीठो खान्कीको रुपमा खाने खानेकुरालाई नै जंक फूड भनिन्छ । यो बजारमा सजिलै पाईन्छ । यस किसिमको खानेकुराले जिब्रोलाई क्षणिक लोभ्याए पनि शरीरलाई हानी गर्छ ।
अझ गर्मीको समयमा त जंक फूड विषलाई विष जस्तै मानिन्छ । यसको सेवनले फूड प्वाइजनिङ समेत हुनसक्छ ।
६. स्पाइसी फूड
हामी अक्सर चिल्लो, चाप्लो, मसलेदार खानेकुरा खान्छौँ । यस्तै खानेकुराको सेवनले हामीलाई रोग लाग्छ । मसलेदार खानेकुराले जिब्रोलाई स्वाद दिए पनि त्यसले पाचन यन्त्रलाई सास्ती दिन्छ ।
त्यस्ता खानेकुरा पचाउन निकै गाह्रो हुन्छ । अझ गर्मीको मौसममा त मसलेदार खाना नखाएकै वेश । किनभने, यसले शरीरको तापक्रम बढाइदिन्छ । पसिना बढी आउँछ र शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ ।
गर्मीका लागि मासुजन्य खानेकुरा उपयुक्त मानिँदैन । यसमा रहेको प्रोटिन चाँडै पच्दैन । यही कारण पाचन प्रक्रियामा असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले गर्मीमा ननभेज खानेकुरामा जोड दिनु हुँदैन ।
हरियो सागपात एवं मौसमी तरकारी सेवन गर्नुपर्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त र तन्दुरुस्त राख्छ ।
८. ड्राइ फ्रूट्स
शरीरलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त राख्न सन्तुलित भोजनको आवश्यकता हुन्छ । यसको नियमित खानामा ड्राई फ्रूट्स पनि सामेल गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यका लागि यो फाइदाजनक छ । तर, गर्मी मौसममा भने होइन । किनभने यसले शरीरको तापक्रम वृद्धि गर्छ । यदि खाने नै हो भने, किसमिश जस्ता रसयुक्त ड्राइ फुड्स ठीक हुन्छ ।
९. तारेको खानेकुरा
गर्मी मौसममा तारेको भुटेको खाने कुराहरु खानु हँदैन । गर्मीमा यस्तो खाने कुरा पच्दैन । अझ घर बाहिर त तारेको, भुटेको खानेकुरा खानै हुन्न ।
किनभने त्यसका लागि एकदमै कमसल तेलको प्रयोग गरिएको हुन्छ । एकपटक तारेको तेल पटक–पटक प्रयोग गरिन्छ, जुन विषाक्त हुनपुग्छ ।
यस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले शरीरमा शक्ति र तरलताको मात्रा पूरा गर्न सघाउ पुग्छ । गर्मीमा के–के खाँदा स्वास्थ्य लाई फाईदा हुन्छ ? आउनुहोस् जानौँ
गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने लस्सी पिउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
गर्मी मौसममा मानब शरीरलाई अत्यधिक मात्रामा पानी चाहिने हुन्छ । धेरै जसो मान्छेले पानीलाई साधा पिउन रुचाउँछन् । तर, कोही कोहीले साधा पानीभन्दा यसमा विभिन्न सामग्री मिसाएर पिउने गर्छन् ।
गर्मीमा शरीरलाई चिसो प्रदान गर्ने खाद्यपदार्थ सेवन गर्न मानिसहरु अनेक उपाय अपनाउँछन् । बजारमा पाइने विभिन्न जुस, गुलकोज वा अन्य घरेलु उपायले पेय पदार्थ बनाउन सकिन्छ ।
बजारमा पाइने विभिन्न कोल्ड ड्रिंक्सले हाम्रो शरीरमा निक्कै नै हानी पुर्याउने गर्छ, त्यसैले हामीले यस्तो पेय पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन । घरमा पाइने र छिट्टै बनाउन सक्ने पेय पदार्थ मध्ये दहीको लस्सी एक हो ।
दही सेवनले शरीरलाई शितलता प्रदान गर्नु का साथै यसमा विभिन्न औषधीय गुणहरु हुने गर्छ । नियमित दहीको लस्सीको प्रयोगले शरीरलाई गर्मीबाट बचाउन सकिन्छ । चिनीबिनाको लस्सी पिउनुलाई हामीलाई धेरैनै फाइदाजनक हुन्छ ।
लस्सी खानाले पाचन प्रक्रियामा मद्दत पुर्याएर आन्द्रा र पेटसम्बन्धी रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्ने गर्दछ । प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने हुनाले हाम्रो हड्डीहरुको विकासमा धेरै सहयोग पुर्याउनुका साथै, दाँत, तथा नङलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यसले शरीरमा फोस्फोरस र भिटामिन डीको मात्रालाई नियन्त्रण गरेर ओस्टियोपोरोसिस, क्यान्सर, हार्टअट्याक र अन्य पेटको विकारविरुद्ध लड्न मद्दत गर्छ । हाम्रो शरीरमा भएको खराब कोलेस्टेरोलरको मात्रा घटाएर उच्चरक्तचाप तथा मुटुसम्बन्धी रोगलाई हटाउन मद्दत गर्छ ।
यसले हामीलाई तनाबमुक्त परेर हाम्रो निद्रा नलाग्ने समस्यामा केही हदसम्म सहयोग र्पुयाउने गर्छ । लस्सीले ब्लड सुगरलाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुर्याउँछ । गर्मीको मौसममा शरीरको तापक्रम कम गर्न लस्सीभन्दा राम्रो अर्को विकल्प अरु देखिँदैन ।
तर, धेरै लस्सी पिएमा ग्यास्ट्रिकको समस्या देखा पर्न सक्ने हुनेले रातिको समयमा लस्सी पिउनु उचित हुँदैन । त्यति मात्र नभएर मधुमेह रोगीहरुले पनि लस्सीको सेवन गर्नु हुँदैन ।
गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने दहीको के-के छ फाइदा
गर्मीको मौसम सुरु भइसकेको छ। गर्मी सुरु भएसँग शरीरमा अत्याधिक पसिना आउने भएकोले शरिरमा पानीको मात्र पनि कम हुने गर्दछ। जसका कारण शरीरले सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी पानी खपत हुने गरेको हुन्छ ।
मानिसहरु गर्मीमा विभिन्न पेय पदार्थ र शरीरलाई शितलता प्रदान गर्ने खाने कुराहरु धेरै खाना रुचाउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा दही खान कसलाई पो मन नलाग्ला र ? गर्मीमा चिसो दही खाँदै शितलताको अनुभूति गर्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ ।
दही धेरैको भान्सामा पाइने खाने कुरा मध्ये एक हो। दहीले खानेकुरालाई पनि पचाउन मद्दत गर्ने गर्दछ। यति मात्र नभएर दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा समेत धेरै फाईदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।
दहीका फाइदाहरु यसप्रकार छन्
दही पेटसम्बन्धी समस्या भएकाका लागि अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ।
भोक कम लाग्ने समस्या भएका व्यक्तिहरुले नियमित दही खाने गरेमा उक्त समस्या कम हुने गर्दछ।
दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रोग तथा पेट सम्बन्धि रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्ने गर्दछ।
दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगलाई निको पार्न मद्दत गर्दछ। दहीले कोलस्ट्रोल बढ्न रोक्नुका साथै मुटुको धड्कनलाई ठीक राख्न मद्दत गर्ने गर्दछ।
दहीमा क्याल्सियमको मात्रा अधिक पाइन्छ, जसले हड्डीहरुको विकासमा धेरै सहयोग पुर्याउनुका साथै, दाँत, ता नङलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
निद्रा नलाग्ने समस्या भएकाहरुले खानाका साथ दैनिक एक कचौरा दही खानाले राम्रो निन्द्रा लाग्नमा केहीहदसम्म सहयोग पुर्‍याउने गर्दछ।
दैनिक दही खानाले पाचन प्रक्रियामा समेत मद्दत पुर्याउने गर्दछ ।
तर खाली पेटमा दही बिर्सेर पनि खानु हुदैन यसमा पाइने प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियाले खाली पेटको एसिडको स्तरलाई बढाउने गर्दछ। जसका कारण खाली पेटमा दहीको सेवन गर्दा पेट पोल्ने समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
राती दही खानु हुदैन, किन ?
रातमा तापक्रम चिसो हुदै जाने र यो आफैमा चिसो खाद्यपदार्थ भएकोले राती दही खाएर सुत्दा यसले खकारको मात्रा बढाउछ । बढेको खकारको पहिलो प्रभाव छातीमा पर्छ । छाती दुख्ने, खसखस हुने, शिथिलता बढ्नुका साथै कार्यक्षमतामा ह्रास र मानसिक अस्थिरताले पूर्ण रुपमा अस्वस्थ्य भइन्छ ।
बिहान अथवा दिउसो मात्र दही खानु राम्रो, किनपनी भनिएको हो भने हामीले खाएको दहीलाई सुर्यको तापमानले सन्तुलित बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ र बिहान दिउँसो हाम्रो शरीर बढी नै सक्रिय हुनेहुदाँ पनि यसले शरीरको चिसोपनालाई नियन्त्रण गर्छ ।
यसरी दही खानुहोस् पेटको समस्या भगाउनुहोस्
दहि स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी कुरा हो । दुधलाई मानिसको स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँने किसिमका ब्याक्टेरियाहरुले दहिमा परिवर्तन गर्ने गर्दछन् । दहि स्वादका लागि मात्रै नभए स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तम हुन्छ । खास गरि पेटको समस्याका लागि दहि सेवन गर्नु एकदमै फाइदाकारी हुन्छ । अपच तथा अन्य पेट सम्बन्धी रोगहरु दहिका कारणले ठिक हुने गर्छन् ।
यस्तो उपयोगी दहिका बारेमा तपाईलाई के कुराहरु थाहा छ ? यदि थाहा छैन भने पनि यो लेखमा हामी छोटकरीमा यसका फाइदाका बारेमा लेखेका छौँ ।
१. दही आफैँ सजिलै त पच्छ नै साथै अन्य खानेकुरालाई पनि दहीले सजिलै पचाउन मद्दत गर्छ ।
२. पेटसम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि दही अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । दही खाँदा पेटको समस्या कम त हुन्छ नै साथै शरीरलाई बल पनि प्राप्त हुन्छ ।
३. दूधबाट दही बनेपछि दूधमा रहेको सुगरको स्वरूप बदलिन्छ । जसले दहीलाई सुपाच्य बनाउँछ । त्यही भएर दूध खाँदा नपच्नेहरूले पनि दही खान सक्छन् ।
४. भोक कम लाग्ने समस्या भएकाहरूले पनि नियमित दही खाने गरेमा समस्या कम हुँदै जान्छ ।
प्रकाशित मिति:२०७७/०१/१९, शुक्रबार
Previous Postहराएको मोबाइल यसरी भेट्टाउन सकिन्छ !
Next Postतपाईलाई के रोग लागेको छ, शरीरले यसरी संकेत दिने गर्दछ – महत्वपूर्ण जानकारी
एकैदिन १७ जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या ९९ पुग्यो
nawayuga2 months ago
तपाईलाई के रोग लागेको छ, शरीरले यसरी संकेत दिने गर्दछ – महत्वपूर्ण जानकारी
सनसिटीमा बस्ने २ जनामा कोरोना भएको पुष्टि
nawayuga3 months ago
भारतको महाराष्ट्रमा बढ्दै ‘कोभिड १९’ का सङ्क्रमित
कोरोना आशंका गरिएका हुप्सेकोटका दुइजनामा कोरोना नभएको पुष्टि